शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको दोस्रो चरणः कुन खेलमा कति गोल ? – Nepal Press
२०७८ मंसिर १४ गते १४:२९
काठमाडौं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको दोस्रो चरणका खेलहरु सोमबार सकिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगाशालामा सम्पन्न दोस्रो चरणका सात खेलहरुमा कुल सात गोल भए । पहिलो चरणमा समान सात खेलमा कुल १६ गोल भएका थिए ।
दोस्रो चरणमा संकटा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबबिचको खेलमा सर्वाधिक ३ गोल भएको थियो । उक्त खेलमा संकटाले फ्रेन्डसलाई २-१ गोलको नतिजामा पराजित गरेको थियो । पहिलो खेलमा नवप्रवेशी सातदोवाटो क्लबले थ्री–स्टार क्लबलाई १-० गोलको नतिजामा हराएको थियो ।
तेस्रो खेलमा एपीएफ क्लब च्यासल युथ क्लबसँग १-० को नतिजामा पराजित भएको थियोे । चौथो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग हिमालयन शेर्पा क्लब १–० को नतिजामा हारेको थियो ।
पाँचौ खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई १-० गोलको नतिजामा हराएको थियो । छैठौँ खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज र न्युरोड टिमले गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो । दोस्रो चरणको अन्तिम खेलमा साविक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब र उपविजेता नेपाल आर्मी फुटबल टिमले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए ।
कोरोना भाइरसका कारण दुई वर्षपछि आयोजना भएको ए डिभिजन लिगको तेस्रो चरणको खेलहरु शुक्रबारदेखी दशरथ रंगशालामा हुनेछन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जारी लिगमा तीन मैदानमा खेल गर्ने बताएपनि पहिलो र दोस्रो चरणका खेलहरु रंगाशालामै समापन भइसकेका छन् । यस्तै तेस्रो र चौथो चरणका खेलहरु पनि रंगाशालामै हुने मिती एन्फाले सार्वजानिक गरिसकेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १४ गते १४:२९
बीबीएल : सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै हुरिकेन्स प्लेअफमा
त्रिवि मैदानमा लोकेश बमको विष्फोट ! १८ बल खेल्दा ९ छक्का
प्रधानमन्त्री कप : आर्मीविरुद्ध सहज जित निकाल्दै एपीएफ फाइनलमा
आसिफ र प्रदीपको शतकीय साझेदारीमा एपीएफले आर्मीलाई दियो २३१ रनको विशाल लक्ष्य
प्रधानमन्त्री कपमा लोकेश बमको कीर्तिमान : १४ बलमै बनाए अर्धसतक
आर्मीविरुद्ध आसिफ र प्रदिपको उत्कृष्ट अर्धसतक
दीपेन्द्र बलिङमा चम्किएपछि वागमतीलाई हराउँदै पुलिस प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा